Shiinaha Cirbadda balanbaalis yar oo soosaarta Warshad iyo Warshad | Weirui
Cirbadda yar yar ee ay ku fadhido balanbaalistu
1. Ka dib faleebada, waxay ku dhex jiri kartaa xididka mudo dheer ka dibna isdhexgalka nidaamka faleebada waxaa lagu dhex gelin karaa isdhexgalka alaabta ee faleebo, iyadoo laga fogaanayo venipuncture, yareynta dhaawaca unugyada iyo infekshinka iyo yareynta xoogga shaqada ee shaqaalaha caafimaadka; Waxaa lagu horumarin karaa ...
1. Ka dib faleebada, waxay ku dhex jiri kartaa xididka mudo dheer ka dibna isdhexgalka nidaamka faleebada waxaa lagu dhex gelin karaa isdhexgalka alaabta ee faleebo, iyadoo laga fogaanayo venipuncture, yareynta dhaawaca unugyada iyo infekshinka iyo yareynta xoogga shaqada ee shaqaalaha caafimaadka;
Waxaa lagu horumarin karaa raajada;
Naqshadeynta kateetarka dheer ee 'Transparent catheter long and catheter connector design' si tartiib tartiib ah loogu fiirsado soo celinta dhiigga;
4.Kateetarka kateetarka waxaa lagu qalabeeyaa go'doomin gooni ah, taas oo ka hortageysa shaqaalaha caafimaadka inay qaadaan dhiiga bukaanka inta lagu guda jiro qaliinka, si wax ku ool ah looga tirtirayo is-qaadsiinta iskutallaabta iyo hubinta xasilloonida irbadda markii la geliyo xididka dhiigga.
5.Model: Qalin-u eg, Balanbaalista, Iyadoo Qalab lagu duray, Garab Yar, Y-moodal
Waxaa loo isticmaalaa cirbadeynta hypodermic ee isbitaalada, rugaha caafimaadka iyo meelaha kale.
Xiga: nooca qalinka irbad ku dhexjirta
Suufiyada Lap Cajiinka
Faashado isku dhafan